Vaovao - Safidy fitaovana fitaovana CNC
Amin'izao fotoana izao, ny fitaovana ampiasain'ny fitaovana be mpampiasa CNC dia misy fitaovana diamondra, fitaovana nitrida boronika cubic, fitaovana vita amin'ny seramika, fitaovana mifono, fitaovana karbida ary fitaovana vy haingam-pandeha. Betsaka ny naotin'ny fitaovana fanapahana fitaovana ary miovaova be ny fananan'izy ireo. Ny lisitra fampisehoana ireo fitaovan'ny fitaovana isan-karazany dia voatanisa etsy ambany. Ny fitaovana fanapahana fitaovana ho an'ny milina NC dia tsy maintsy voafantina arakaraka ny workpiece sy ny toetoetran'ny milina. Ny fisafidianana ireo fitaovana fanapahana fitaovana dia tokony ho araka ny antonony amin'ny filalaovana zavatra fanodinana, fitaovana fanapahana fitaovana ary ny lalao fanodinana zavatra, indrindra ilazana ny toetra mekanika, toetra ara-batana sy ny fananana simika ny roa lalao, mba hahazoana ny fiainana fitaovana lava indrindra sy ny vokatra fanapahana lehibe indrindra.
1.Matching fitaovana fanapahana fitaovana miaraka amin'ny toetra mekanika ny milina zavatra ny mifanentana ny fanapahana fitaovana fitaovana amin'ny toetra mekanika ny milina zavatra indrindra dia manondro ny fampifangaroana ny fanapahana fitaovana miaraka amin'ny toetra mekanika toy ny tanjaka, henjana ary hamafin'ny fitaovana workpiece. ny fananana mekanika samihafa dia mety amin'ny fitaovana hafa. (1) ny filaharana fanamafisana ireo fitaovana dia: fitaovana diamondra> fitaovana nitrida borika toradroa> fitaovana vita amin'ny seramika> karbida> vy mahery hafainganam-pandeha. karbida vy> fitaovana vita amin'ny seramika> fitaovana diamondra sy borika boronika cubic. (3) ny filaharan'ny hamafin'ny fitaovana dia: vy haingam-pandeha> karbida> nitrida boronika, diamondra ary fitaovana vita amin'ny seramika. miaraka amin'ny fitaovana miaraka amin'ny hamafin'ny avo kokoa. Ny hamafin'ny fitaovan'ny fitaovana dia tsy maintsy avo kokoa noho ny hamafin'ny fitaovam-piasana, takiana amin'ny ankapobeny ho mihoatra ny 60HRC. Ny sarotra ny fitaovan'ny fitaovana, ny fanamafisana ny fitafiana anaovany. Ohatra, rehefa ny haben'ny koba amin'ny karbida simenitra mitombo, mitombo ny heriny sy ny hamafiny ary mihena ny hamafiny, ary mety amin'ny milina marokoroko izy io.Raha mihena ny votoatin'ny kobalta dia mitombo ny hamafiny sy ny fitafiany ary azo atao tsara ny mamita azy. fanapahana haingam-pandeha: ny fahombiazan'ny hafanana avo lenta amin'ny fitaovana fanapahana seramika dia ahafahan'izy ireo manapaka amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta, izay 2 ~ 10 heny haingana noho ny karbida.
2.Ny fitaovana enti-manapaka sy ny toetra ara-batana amin'ilay zavatra fanodinana dia mifanentana amin'ireo fitaovana amin'ny fananana ara-batana samy hafa, toy ny fitondra hafanana avo lenta ary ny teboka miempo ambany amin'ny fitaovana vy haingam-pandeha, ny teboka miempo ary ny fanitarana hafanana ambany an'ny fitaovana seramika, ny fitarihana hafanana avo lenta ary ny fanitarana hafanana ambany ny fitaovana diamondra, sns., izay mety amin'ny fanodinana ireo fitaovana anaovana fitaovana dia samy hafa. Rehefa milina ilay fitaovana tsy dia tsara ny fitondra amin'ny hafanana dia tokony hampiasaina ilay fitaovana ampiasaina amin'ny fitarihana hafanana tsara hanamboarana haingana ny hafanana fanapahana. ary mampihena ny maripana fanapahana. Noho ny fitondra hafanana avo sy ny diffusivity amin'ny hafanana, ny diamondra dia mora mivoaka amin'ny hafanana manapotipotika ary tsy hamokatra deformation hafanana lehibe, izay manandanja indrindra ho an'ireo fitaovana fametahana milina miaraka amin'ny fepetra takiana avo lenta. mari-pana amin'ny fitaovana isan-karazany: fitaovana diamondra 700 ~ 8000C, fitaovana PCBN 13000 ~ 15000C, c eramic fitaovana 1100 ~ 12000C, TiC (N) miorina simenitra karbida 900 ~ 11000C, WC fotony karbaona vita amin'ny simenitra tena tsara 800 ~ 9000C, HSS 600 ~ 7000C. Ny filaharan'ny fitarihana hafanan'ny fitaovana isan-karazany: PCD> PCBN> WC karbida> TiC (N) karbida simenitra> HSS> ceramika miorina si3n4> seramika miorina a1203. Ny filaharan'ny coefficient fanitarana hafanana ny fitaovana isan-karazany dia: HSS> karbida simenitra WC> TiC (N)> ceramic base A1203> PCBN > Ceramic base Si3N4> PCD. Ny filaharan'ny fanoherana ny hafanana amin'ny fitaovana isan-karazany dia ny HSS> firaka mafy WC> seramika si3n4-base> PCBN> PCD> TiC (N) firaka sarotra> seramika a1203-base.
3.Ny olana mifanandrify amin'ny fitaovana fanapahana fitaovana sy ny fananana simika an'ny zavatra fanodinana dia manondro indrindra ny fampifangaroana ireo masontsivana fananana simika toy ny fifandraisan'ny simika, ny fihenan'ny simika, ny fanaparitahana ary ny famongorana ireo fitaovana fanapahana sy ny fitaovana ampiasain'ny fitaovana. samy hafa ny fitaovan'ny fitaovana mety amin'ny fanodinana ireo akora workpiece. (1) ny mari-pana adhesion fitaovana (ary vy) ho an'ny PCBN> ceramika> karbida simenitra> HSS. (2) ny hafanan'ny fanoherana ny fihanaky ny otrikaina amin'ny fitaovana fanapahana isan-karazany dia toy izao manaraka izao: seramika> PCBN> diamondra karbida> HSS. Ny tanjaky ny fanaparitahana ny fitaovana fanapahana (ho an'ny vy) dia: diamondra> seramika si3n4-base> PCBN> seramika miorina a1203. ceramic base> PCBN> SiC> Si3N4> diamondra.
4. Amin'ny ankapobeny, PCBN, fitaovana vita amin'ny seramika, karbida mifono ary fitaovana TiCN karbida fototra dia mety amin'ny fanaraha-maso fanaraha-maso isa amin'ny ferrous.